Theresa May Reysul Wasraha Dalka Ingiirsk oo Jahwareer Siyaasadeed kujirto – Balcad.com Teyteyleey
reeysul Wasraha Dlaka Ingiirsk Theresa May oo dhex maquureeysa qas iyo jahawreer siyasada dalka Ingriisk. arintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii golaha wasiirada dalka kasoo ifbaxay kaladuwnaasho iyo mucaaradad xooga. siysada dalka Ingirska ayaa yeeltay wajiyo kaladuw waxii ka dambey kabixintanka Yurub dalka Ingiirska ka baxay
Theresa May oo ah reeysul wasaaraha dalka ayaa waxaa la filaya in waxbadan qabandoonto xlada siysadeed, dhaqaale iyo amaan dalka ka jirtay mudoyinka dambe. waxana ay dhex maquuraysa dhaqaale dalka oo sii yaranaya, shaqp la’aan dhalinyarada 45 ka yar oo awooda codbixint doorashada 2020 fooda nagu hayso
theresa May waxaa ay balanqaaday in ay dhinto lacagta waxbarashad heerka jamacadaha, dqaliga dadka soo galo in la kordhiyaa, shirkadaha in deen lasiindoon iyo in ay la dagaasho argagaxisada ka dhanka amaanka.
dalaka ingiriiska ayaa la daala dhacaya dhibaatada ay ka dhaxleeyn afitada ka go’id midowga reer yurub oo ah ururka weyn oo ay ku mideysan yahiin dalaka yurub intoodabadan. dalka ingiriiska ayaa ah horumuudka ururka midowga yurub. nasiib daro dadka ingirska ayaa u coday iney ka baxan
The post Theresa May Reysul Wasraha Dalka Ingiirsk oo Jahwareer Siyaasadeed kujirto appeared first on Ilwareed Online.
Gudoomiye jawaari iyo dhigiisa masar oo qaahiro kulankudhexmarey